Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Niverina niasa indray ny Holland America Line
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Cruising • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny Nieuw Statendam Holland America Line dia niainga tao Fort Lauderdale, Florida, androany tamin'ny diany voalohany nanomboka tamin'ny fiatoana nanerana ny indostria tamin'ny taon-dasa. Ny sambo dia manamarika ny sambo Holland America Line fahadimy niditra indray tamin'ny serivisy, nanatevin-daharana an'i Rotterdam, Koningsdam, Eurodam ary Nieuw Amsterdam.
Ho fahatsiarovana izany fotoana izany dia nanao lanonana fanapahana kasety tao amin'ny seranana ny Holland America Line mba hanokafana ny sambo, ary niarahaba ireo vahiny tamin'ny faneva nanofahofa saina ny ekipan'izy ireo rehefa niakatra ny sambo. Nieuw Statendam niondrana an-tsambo nandritra ny fito andro any amin'ny faritra andrefan'i Karaiba izay hitsidika an'i Nassau, Bahamas; Ocho Rios sy Port Royal, Jamaika; ary Half Moon Cay, nosy manokana an'ny Holland America Line any Bahamas.
Nieuw Statendam handany ny volana Novambra ka hatramin'ny Aprily any Karaiba amin'ny dia an-tsambo manomboka amin'ny fito ka hatramin'ny 11 andro, ny fitsangatsanganana rehetra avy any Port Everglades any Fort Lauderdale. Ireo vahiny mitady fialan-tsasatra lava kokoa dia afaka manomboka amin'ny Diarin'ny Mpamory — dia zotra mihemotra izay manolotra fikarohana lalina mandrakotra faritra mihoatra ny iray amin'ny faritra.
Ny fitsangantsanganana Karaiba rehetra dia misy antso ao amin'ny Half Moon Cay, nosy Bahamian tsy miankina nahazo loka Holland America Line. Nivoatra ho kianja filalaovana tropikaly ho an'ireo vahiny mandeha sambo ity toeram-pialan-tsasatra hafahafa ity ary ahitana tora-pasika fasika fotsy; trano misy rihana roa sy cabana manokana; toeram-pisakafoanana matsiro toy ny Lobster Shack; valan-drano ho an'ny ankizy; ary karazana fitsangatsanganana mahafinaritra ho an'ireo tia zavaboary, mpanao dia lavitra ary mpitsikilo.
Ny Holland America Line dia nifindra tany Port Everglades nanomboka tamin'ny taona 1990. Amin'ny fomba fiasa, ny fitsidihana sambo tsirairay dia manome $ 364,000 mivantana amin'ny toe-karena eo an-toerana amin'ny famatsiana (solika, sakafo, voninkazo, fametahana piano, kojakoja, sns.), hetra sy fandaniana. Ny Holland America Line dia miara-miasa amin'ireo mpivarotra 100 any South Florida izay mamatsy entana sy serivisy ho an'ny orinasa sy ny sambony.
Nandritra ny taona maro, ny Holland America Line dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa mihoatra ny 30 any South Florida tamin'ny fanomezana, sakafo antoandro an-tsambo, ary fanomezana an-tsambo, anisan'izany ny Seafarers' House, Henderson Behavioral Health, Coast Guard Women's Leadership Initiative, Symphony of the Americas, Ny Opera Society sy ny maro hafa.